यौ’न स’म्प’र्कबाट च’रम आ’नन्द लि’न चा’हाने हो ? एक पटक पढ्नुहोस । – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनयौ’न स’म्प’र्कबाट च’रम आ’नन्द लि’न चा’हाने हो ? एक पटक पढ्नुहोस ।
April 13, 2021 admin मनोरंजन 4432
यौ’नप्रति हाम्रो विकृत सोंच छ । यौ’न भन्नसाथ त्यसलाई छा’डा भनेर नाक खुम्च्या’उने प्रवृत्तिले यस सम्बन्धमा खुला बहस हुन सकि रहेको छैन । नतिजा, यौ’नकुण्ठा जस्ता मनोविकारले धेरैलाई ग्र’स्त बनाइरहेको छ । दाम्पत्य जीवनमा यौ’न सम्बन्धले खास महत्व र अर्थ राख्छ । यौ’न स’म्बन्ध बनाउनु भनेको केवल बंश निरन्तरताका लागि मात्र होइन । न त हल्का मनोरञ्जनका लागि मात्र ।
यो दम्पतीको मन, शरीरलाई एकाकार गर्ने एउटा प्राकृतिक र उत्तम विधी हो । यौ’न सम्ब’न्धमा जुन किसिमको मधुरता हुन्छ, त्यसले दम्पतीको सम्बन्धमा उर्जाको संचार हुन्छ । तर, यौ’न सम्ब’न्ध कमजोर भयो भने उनीहरुको सम्ब-न्ध पनि फिका हुन पुग्छ । आखिर किन यौ’न सम्ब-न्ध कमजोर र बोझिलो हुन्छ ? यसका दोषी को ? श्रीमान् कि श्रीमती ? वा दुबै ? हुन यसबारे जान्न, सोच्न र सुधार गर्न गरूरी छ ।बेफुर्सदिला दम्पती :-अहिले जमाना बद्लिएको छ । मान्छेको दिनचर्या बद्लिएको छ ।
आधुनिक उपकरणसँग एकाकार हुँदै गएको मानव जीवनमा धैर्यताको कमी हुँदैछ । हरेक कुरा छिटो-छरितोहोस् भन्ने चाहन्छन् । सबैलाई एक किसिमको हतारो छ । छिटो पढाई सक्ने, छिटो रोजगारी गर्ने,छिटो धन कमाउने, छिटो मान-प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने । यो हतारो एक प्रवृत्तिको रुपमा विकास भएको छ । यसको साइड इ-फेक्ट मानिसको यौ’न जीवनमा पर्न थालेको यौ-नमा पनि हतारो ! हो त, हामीलाई अहिले यौ’न सम्ब-न्धलाई सुमधुर बनाउने फुर्सद छैन । यौ’न सम्बन्ध क्षणभरमै बनाउने र क्षणभरमै त्यसबाट सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने चाह बढेको छ । अर्कोतिर काम, करियर, पैसा आदिको चक्करमा मानिसहरु गल्दै गएको छ । उनीहरुको मस्तिष्कमा केवल ‘कसरी कमाउने’, ‘कसरी सफल हुने’, ‘कसरी प्रगति गर्ने’ भन्ने कुरा मात्र घुम्न थालेको छ ।
यसरी उनीहरु यौ’न बाट क्रमस टाढिदै गएका छन् । आफ्नै शरीर र शरीरको आवश्यक्तालाई भुलेर सुख-सुविधा,उन्नती-प्रगति, मान-प्रतिष्ठा खोजिरहेका छन् । यसले उनीहरुको यौ’न जीवन क्रमस ओझेल पर्दै गएको छ ।दिनभर दम्पती काममा व्यस्त हुन्छन् । दुबै आ-आफ्नै कमाई, धन्दामा लाग्छन् । दुबैलाई काम र करियरकै धुन हुन्छ । साँझ घर र्फकन्छन् । फेरी उनीहरु मोबाइल, टिभी वा सामाजिक सञ्जालमा भुलिन्छन् । आपसी सम्वाद हुँदैन । स्पर्श हुँदैन । शारीरि’क स-म्बन्धको कुरा छाडौं । रोमाञ्चक यौ’न जीवनका लागि :- दम्पतीको सम्बन्धलाई रोमाञ्चक बनाउन यौ-न सर्वोत्तम विकल्प हो । यसका लागि दुबै शा-रीरिक रुपमा तयार भएर मात्र पुग्दैन, मान’सिक रुपमा पनि उत्तिकै उत्सुक हुन जरुरी छ । एकजना यौ’नका लागि तयार भइरहँदा अर्का पार्टनरलाई त्यसप्रति खास चासो हुँदैन । यसरी एकजना को मात्र दवा-वमा बनाइने यौ’न स-म्बन्ध रोमाञ्चक हुँदैन । त्यसैले जब एक पार्टनर यौ-नका लागि तयार हुन्छन्, अर्का पार्टनर लाई पनि त्यसमा उत्साहित गराउनुपर्छ । यसका लागि का*मुक हाउभाउ, पहिरन,वातावरण आदि थुप्रै कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सिनेमा, संगीत, पुस्तकले पनि सघाउन सक्छ ।
यौ’नजी-वनलाई सुखी बनाउने केहि टिप्स :- यौ’नस-म्पर्कका बेला हरेक कुरालाई ग-म्भीर रूपले लिने गल्ती नगर्नुहोस् । -स’म्भोगका बेला जोडीको मुड खराब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर स-म्भोगका लागि जोडी तयार नहुँदै कर नगर्नुहोस् । स’म्भोगका विषयमा तपाईंं वा जोडीको मनमा केही शंका भएमा पहिले त्यसलाई हटाउनुहोस् र मात्र सम्भो’गको सिलसिला अघि बढाउनुहोस् । यौ’नजी-वनको पर्याप्त आनन्द लिनका लागि तपाईंं शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । स’म्भोगलाई निरन्तरता दिनुहोस् । सम्भो’गका दौरान जोडीको स-न्तुष्टिको ख्याल गर्नुहोस् । पाक-क्रिया लाइ बढी भन्दा बढी जोड दिनहोस् । स’म्भोगका बेला कम बोल्नुहोस् र आफ्नो जोडीका कुरापनि सुन्नुहोस् । स’म्भोगका बेला आफ्नो जोडीको प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोला । सम्भो’गका बेला एक–अर्कामा शारी-रिक एवं मानसि’क रूपले बढी भन्दा बढी नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस् ।********************************
म’हिलाले ए’क्लै ‘सु’खभो’ग’ प्रा’प्त ग’र्ने २ उ’पाय
April 11, 2021 admin मनोरंजन 4638
February 8, 2021 admin मनोरंजन 17017
August 20, 2020 Administer अन्तर्राष्ट्रिय, मनोरंजन, स्वास्थ्य /जिबनशैली 107076
LEX 18 agenda conversation: Job club (544601)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515051)
Hello world! (436012)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398459)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109048)